Ogaden News Agency (ONA) – Dacaayadaha Raqiiska ah ee shirkadda Shiinaha ee Petro Trans
Dacaayadaha Raqiiska ah ee shirkadda Shiinaha ee Petro Trans
Posted by ONA Admin	/ August 14, 2011
Waxay shabakadaha wax ka qora arimaha Waqooyiga Somaliya aad u buun-buuniyeen heshiis la yidhi waxaa laga saxiixay Siilaanyo oo dhigaya in Gaaska Ogadeya laga dhoofinayo dakadda Berbera. Heshiiskan waxaa ka horeeyay oo isagana maalmo la hadal hayay heshiiskii shirkadda Shiinaha ah PetroTrans Company Ltd. Mana aha markii ugu horeysay ee dacaayadahan oo kale caalamka la maqashiiyo.
Ujeedada Itobiya waxay weeye marka si sahlan loo dhigo inay dacaayad iyo heshiisyo waraaqo lagu qoray kaga dhaadhiciso caalamka arin aan ka jirin Ogadenya. Ugu dambayntana wuxuu dhibka ugu weyn ku dhacayaa qofkii ama shirkadii rumaysata dacaayadaa ee soo aada Ogadenya.
Qadiyadda Ogadenya waxay noqotay hadda qadiyad caalami ah oo aduunka uu isha ku hayo. Dagaalka ka socda Ogadenya iyo tacadiyadda ay ciidamada gumaysiga Itobiya ka wadaan ma’aha wax ka qarsoon caalamka. Si Itobiya ay uga jeediso caalamka qodobka dhabta ah (the real issue) ee caalamka uu isha ku hayo hadda ee ah xasuuqa uu Wayaanaha ku hayo dadka shacabka ah ee Itobiya guud ahaan iyo gaar ahaan dagaalada gobanima doon ee ka socda Ogadenya, ayay kolba Itobiya iyadoo kaashanaysa Shiinaha ay soo saaraan wax ay ku tilmaameen heshiis iyo suuq gayn Gaaska iyo Shidaalka Ogadenya.
Haddii Shiinaha ay u gogol xaadhayaan heshiis hirgala 50 sano ka dib oo maadaama ay dawlad weyn tahay ay qorshe qarniyeed ay dajisanayso waa meesheeda iyo xaaladeeda. Arimahase loogu talagalay dacaayadda iyo in caalamka laga gado waxaan jirin ee Itobiya ay ku doonayso inay ku abuurto dareen ay kaga dhex faa’daysto quwada isku haya Afrika ee Reer galbeedka iyo Shiinaha ah, waxaa haboon inuusan Siilaanyo dhexda u galin.
Waxaa iyadana nasiibdarra ah in Qarnigan 21aad uu Shiinaha ku soo baraarugo Afrika inuu dib u gumaysto, oo bilaabo dhaqan la mid ah kii qarnigii 18aad markay reer Yurub intay dhowr qof oo oday-dhaqameedya ah ka saxiixdaan waraaqo ay sidaa ku xalaalaysan jireen dal iyo dadkii lahaa.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya digniin af iyo adinba ah way siisay shirkadaha u malaynaya inay Itobiya kula heshiin karaan shidaalka Ogadenya. Shirkaddan Shiinaha ee Petro Trans qudheeda digniin ku filan hadda way heshay.
ugu damabyntii, waxba kama badalayso xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta Ogadenya dacaayadaha raqiiska ah ee Itobiya ay u soo kaxaysatay Siilaanyo ee la doonayo in shacabka lagu jahawareeriyo .
Awalan waan idin salamay ONA hadan fikirkayga ka dhiibto xaalada wadanka iyo sida ay wax u dhacayaan koley wax badan ka badi mayso wixii horay u jiray marka laga reebo dacaayad raqiis ah oo la maqashiiyo caalamka hadii ayba dhacdo in ay ku heshiiyaan china iyo Ethiopia in ay la soo baxaan shidaalka ogadenia oo ay ogyihiin wixii ka gaaray 2007 cobale waa uun dacaayad ay reer galbeedka ku indha saracaadinayaan laakiin waxa aan rabaa in aan waran gaarsiiyo kuwan waqooyiga somalia waxa aan leeyahay waxa uu isku dirayaa dadka walaalaha ah ee wada daga ama xuduuda ;leh ee waqooyiga somalia iyo ogadenia mana aha in uu wato agande ah in uu ku gor gortamo dakadiisa ee waxa ay thay xaqiiqdu waxa meesha geeyey zenawi waxa aan la soco naa in uu ka soo tuulay hargaysa asaga oo u socda addis abab waxa uu damcay in uu ku soo dagay garoonka dirdhaba xili habeen ah waxa loo sheegay in uuna ku soo gakarin xili habeen ah oo uu ku laabto hargaysa wuu ku laabtay maalinkii dambe ayuu hadana soo duulay oo is iri addis ka dag waxa lagu war galiyey in uu marka hore diridhaba ku soo dago marka labad uu u soo duulo addis wuu sameeyey addis ayuu yimid waxa laga saxiixay in 50 sano ee soo socota ay dakada berbera gacanta ku hayso itobiya wuu saxiixay asaga oo aan hadal ka soo celin karin china in uu u duulo ayuu damcay waxa uu tagay garoonka waxa loo sheegay in uu san wax invitation ay san u haynin oo aysan aqoon sanayn warqadan uu wato wuu ka soo laabtay asaga oo dhaforka haysta habeen kii dambe zenawi aya duulay asaguna wuu kadaba duulay invitation kii wuu ka dhacay xiligaa waxa uu ka dagay china asaga oo aan haysan wax invte ah watana travel ducument aan laga ogalayn china xiligaas waa la xiray siilaanyo maalinkadib ayaa la sii daaayey ninka arinkiisu uu halkaas marayo miyaa shidaalka ogadenia in uu kahadlo u banaantahay waad mahadsantihiin
waa laqodi kan ee sheeko kale keen sxb gabgab ayaad heyssaaye kkkkkkkkkk
lehelow aad ayaada oo gu maha sanatahay fikir kaaga fiican
waxana waaa hadal been ah ma gala kaaaran ogadenia shirkadaaha jana waxaanada ogaataa in afka waxa laga sheego ama laga saxeexo waaa arin fududu laakin way adaga tahay in la oofiyaa ama shidaalaka ogadenia lagula baxo ciyaaar
Wan idin salamay kadib runti tana waxay kamid tahay un damaca walan e xukumada gumaysiga ethiopia e hororka ah haday awodana wa hore yay ka faidaysanlahay khayradka ogadenia inbadan o hore na way ku hongawday tana walamid un allahu akbr
calaf la aan intay Chiinuhu iyo Amxaaro dabo gaa gaab gaas kaqotaan Ogadeen in ay kuma caaashaan ana guna aan qaxooti ahaano midaas wax dhici ma aha ee waa riyo.